ऋणीलाई सहयोग नगरे बैंक पनि डुब्छन्ः इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ ज्योति पाण्डे – Clickmandu
ऋणीलाई सहयोग नगरे बैंक पनि डुब्छन्ः इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ ज्योति पाण्डे
क्लिकमान्डु २०७७ असार १ गते ११:२३ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेका कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुको ब्याज २ प्रतिशतले घटाइसकेको छ भने ऋणको सावाँब्याजको किस्ता असार मसान्तसम्म सारिदिएको छ । थप राहत कसरी दिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगतरुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको छ । उक्त अध्ययन अनुसार राष्ट्र बैंकले यही असार अन्तिम साता सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत् थप राहत प्याकेज ल्याउने छ । निक्षेपकर्ता होस् या ऋणी प्रत्यक्षरुपमा ठोक्किने भनेको बैंकसँगै हो । कोरोना भाइरस र राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेजले बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्यो ? ऋणीहरुको मनोवल कस्तो छ ? इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफ्ना ऋणीहरुलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः
कोरोना भाइरसले तपाईको बैंकलाई कस्तो असर गर्यो ?
कोभिड १९ का कारण सरकारले लकडाउन गर्यो । बैंक अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने हुँदा हामीले बैंकका शाखाहरु खोल्यौं । बीचमा केही कम शाखा खोले पनि अहिले सबै शाखाबाट बैंकिङ सेवा दिएका छौं । अहिले दैनिक ३ सयभन्दा बढी व्यक्ति दरवारमार्गमा ग्राहक आउने गर्छन् । म आफैं पनि काठमाडौंका शाखाहरुमा कसरी दूरी कायम भएको छ भनेर हेर्न गएको छु ।
कोभिड १९ को असर नभएको कुनैपनि क्षेत्र छैन । कसैलाई बढी असर परेको होला कसैलाई कम त्यो मात्र फरक हो । उदाहरणका लागि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई बढी असर पर्छ भने अरुलाई कम होला । बैंकको कुरा गर्ने हो भने अवस्था निकै नै कठिन छ ।
काउन्टर ग्यारेन्टीमा फसेको २ अर्ब उठेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओको खुसी- ठूलो खड्गो टर्यो
चैतमा पनि मानिसहरुले पेमेन्ट हालेनन् । अब असार मसान्त सकिन एक महिना बाँकी छ । एक महिना कसरी लकडाउन खुल्ने हो कसरी काम हुने थाह छैन । अब काम हुनको लागि श्रमिकहरुको अभाव छ । बैंकको ब्याज आएको छैन । किस्ता तिर्ने समय दिएका छौं । असारमा किस्ता उठ्ने देखिएको छैन । अहिले ऋण नतिर्ने भएका भने होइनन् । हामीले ऋणीलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ । उनीहरुलाई चाहिने वर्किङ क्यापिटल दिनुपर्ने हुन्छ । अलिकति पैसा दिएर हामीबाट ऋण लिनेलाई चल्न दिनुपर्छ । हाम्रो देशमा भूकम्पपनि गएको थियो नाकाबन्दी पनि भोगिएको हो । केही समयपछि हामी पुनः पुरानै स्थितिमा फर्कन सक्छांै भन्ने आशा गर्नुपर्छ । हामीलाई करिब ६ महिना गाह्रो हुनसक्छ । मनमा डर छ ।
आजको दिनमा हामीले ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भनेर उसको धितो लिलाम गर्नु भएन । त्यो लिलाम गरियो भने बैंक पनि सकिन्छ । ऋणी पनि सकिन्छ । अहिलेको समय भनेको असजिलो स्थिति हो । पोखरा, चितवन भनेको लकडाउन खुलेर अलिकति सहज भएपनि आन्तरिक पर्यटन फस्टाउने छ । मौद्रिक नीतिले थप राहत देला कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । ब्याज उठ्ने सम्भावना छैन । राष्ट्र बैंकले निश्चित छुटहरु दिन्छ ।
बैंकका ऋणीलाई सहयोग गर्ने कुरा गर्नु भयो । कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले अहिले ऋणीसँग बसेका छौं । उनीलाई पत्र पठाएका छौं । कत्तिको असजिलो अवस्था छ भनेर जानकारी लिएका छौ । ऋणीहरुसँग म आफै पनि कुरा गरिहरेको छु । हामीले ऋणीलाई असजिलो स्थितिमा तपाईंहरुलाई सहयोग गर्छौ भनेका छांै । तपाईहरुको वर्किङ क्यापिटल हामी दिन्छौं भनेका छौं ।
ऋणीहरुले तपाईसँग के भने त ?
ऋणीहरु आशावादी छन् । वर्किङ क्यापिटलको सुविधा दिएमा चल्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ उनीहरुको छ । केहीका उद्योग व्यवसाय चलेको छैन । केहीको चलेको छ । केहीको बजारमा पैसा छ । बजारबाट पैसा आउनपनि समय लाग्छ । पहिला ९० दिनमा पैसा उठ्ने थियो भने १८० दिनमा पैसा उठ्छ ।
वर्किङ क्यापिटल थप गर्नका लागि कस्ता ऋणीलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
टेलिकम क्षेत्रले माग्दैन । तर, उसको आम्दानी घटेको छ । लकडाउन पिरियडमा टेलिकमको आम्दानी घटेको छ । मेडिकलमा नै कुरा गरौंऔषधी कम्पनी उनीहरुको पनि व्यवसाय घटेको छ । यो बिक्रेता रिटेललाई मात्र फाइदा छ । जसलाई असर परेको छ उनीहरुलाई हामीलाई सहयोग गर्छौं । अहिले ऋण घटेको छ । अहिले ओभरड्राफ्टको प्रयोग नै ऋणीले गरेका छैनन् ।
व्यवसायीहरुले बैंकले ऋणको ब्याज घटाएनन्, राष्ट्र बैंकले दिनु भनेको सहुलियतपनि दिएनन् भनिरहेका छन् नि ?
कति व्यापारी बैंकर नै छन् । हामीले भन्दा बढी नै बैंकको बारेमा बुझेका छन् । अर्को व्यापारीले पनि ६ प्रतिशत ५ प्रतिशतमा ऋण चाहियो भनेर मागेका छन् त्यो सम्भव नै छैन । हामीले पनि १ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप लिन पाए राम्रो नै होला । तर, निक्षेपकर्तालाई पनि हामीले मार्नु भएन । कतिपय मान्छेहरु मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेर चल्नेहरु पनि छन् । बैंकहरुले दिनुपर्ने ऋणीलाई सहुलियत दिएका छन् । हाम्रो बैंकले २ प्रतिशत ब्याज बैशाखदेखि नै ऋणीलाई घटाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा हामीले मान्नुपर्छ । २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने भनेको ठूलो राहत हो ।
ऋणीलाई पनि बचाउने निक्षेपकर्तालाई पनि मर्का नपर्ने गरी कति प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकले ऋण दिन सक्लान् ?
बैंकहरुको बेसरेट नै हेर्नुपर्यो । यो सबै बैंक अनुसार फरक हुन्छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ क्यालकुलेशन अनुसार हाम्र्रो बेसरेट ०.६ प्रतिशत घट्छ । हामी ५÷६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन सम्भव भने हुँदैन । एक त्रैमासमा ५४ करोड रुपैयाँ हाम्रो नाफा घट्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर घटाएअनुसार ऋणीको ब्याजदर घटेन भन्ने गुनासो छ ?
हामीले २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । अबको दिनमा २ प्रतिशत छुट भन्दा पनि लकडाउनको मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो । यो भने सजिलो हुने हो।
एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरणले यो पटक कस्तो असर पर्ने हुन्छ ?
एनएफआरएस अनुसार पछि आउने आम्दानी देखाउन मिल्छ । हामीले सो अनुसार सरकारलाई कर समेत तिर्नुपर्छ । सरकारले कर लिन्छ कर्मचारीले बोनस पाए पनि सेयरधनीले भने लाभांश नपाउन सक्छन् । तर, यो कुरा बैंकअनुसार फरक पनि पर्छ । मेरो ५४ करोड नाफा हरेक महिना हुन्थ्यो । बैशाखमा ३६ करोड रुपैयाँमात्र भयो । असारमा बैंकअनुसार आम्दानीलाई कसरी राख्ने नराख्ने भन्ने निर्णय बैंक अनुसार गर्नुपर्छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यसमा के गर्छ ?
इटालीको बैंकबाट हामीले लिनुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँ नआएको भए हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्ने थियो । यो पैसा आएर रिलिफ पाएमा त्यो गर्नुपर्दैन । कति आम्दानीमा राख्ने हामीले पछि निर्णय गर्ने छौ । अब नगद लाभांश पहिला जस्तो आउने छैन । राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्छ ।
कोभिड १९ ले बैंकिङ क्षेत्रलाई के पाठ सिकायो ?
कोभिड १९ ले अरु क्षेत्रमा वर्क फर्म होम भन्ने कल्चर विकसित भयो । हामीले पहिला ४ वटा टेलर राख्यौं । मान्छे आएपछि १६ वटा टेलर राख्नु पर्यो । कार्डको रिक्वेक्स, लिमिड बढाउने रिक्वेक्स अनलाइन मार्फत आएको छ । प्रविधिमा अब जार्नु पर्छ । तर, यो चरणअनुसार जानुपर्छ । प्रविधिमा पनि ठूलो खर्च छ । अब स्वीच हरेक वर्ष फेर्नुपर्छ । हरेक वर्ष ७/८ करोड खर्च लाग्छ । प्रविधि अपग्रेड गर्नेमा धेरै नै पैसा खर्च गर्नुपर्यो । मान्छे भरसक बैंकमा कम आओस मोबाइलबाट सबै गर्न सकोस । अब डिजिटलमा जानु नै पर्छ । त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
फेरि जति गरेपनि हामी नेपालीहरुको मानसिकता बैंक नै आउने नै हुन्छ । सबै काम डिजिटलमात्र हुँदैन । कतिपय सिनियर ग्राहकहरु आफै बैंकमा आउने नि छन् । समयअनुसार यो परिवर्तन हुन्छ ।
लामो समयदेखि विभिन्न सूचकहरुमा नम्बर वान बनेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पछिल्लो समय आफ्नो विरासत गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ । नम्बर वान रहिरहन मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । मर्जरको तयारी कस्तो छ ?
हामी ठूलो बैंक पहिला पनि थियौं । र, अहिले पनि छौं । तर, आगामी दिनमा पनि नम्बर वान रहिरहनका लागि मर्जर र थप आक्रमक व्यवसाय विस्तार गर्नै पर्ने भएको छ । हामीले मर्जरको गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
नम्बर वानको बिरासत जोगाउन इन्भेष्टमेन्ट बैंक बिग मर्जरमा जाने, छिट्टै खबर सुनाउँछौं: सीइओ पाण्डे
इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज हुन इच्छा देखाउँदै ३/४ वटा बैंकले प्रस्ताव पनि गरेका छन् । हामीले ओके भन्ने वित्तकै मर्ज भइहाल्ने अवस्था पनि छ । तर हामीले तुलनात्मक लाभ मिल्ने संस्था हेर्नुपर्छ । हामीले मर्जरमा गृहकार्य गरिरहेका छौं । सबैचिज मिल्यो भने छिट्टै केही होला । मर्जर हुने भयो भने चाँडै नै तपाईंहरुले खबर सुन्न पाउनु हुनेछ ।
राज्यले पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ, बैंकरलाई लागत घटाउनुपर्ने चुनौति छ, लागत घटाउने उपयुक्त विकल्प मर्जर हो ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने वार्षिक २४ करोड भाडा दिर्छौं, १२ करोर सेक्युरिटी गार्डमा खर्च छ, आइटी सेक्युरिटीमा पनि करोडौं खर्च छ, मर्जरमा जाने हो भने यी खर्चमा केही कम गर्न सकिन्छ ।
हिमालयन बैंकसँग मर्जरको हल्ला छ नि ?
हिमालयन बैंकसँगको मर्जरको हल्ला अहिलेसम्म हल्लामात्रै हो । हिमालयन बैंकसँग धेरै पहिला कुरा भएको हो, अहिले त थप ३/४ वटा बैंकसँग हाम्रो सञ्चालक समितिले, अध्यक्षले कुरा गरिरहनु भएको छ । व्यवस्थापनको तर्फबाट मैले कुन बैंकसँग मर्ज गर्दा के हुन्छ भनेर ब्रिफिङ पनि गरिसकेको छु । सञ्चालक समितिलाई जुन उपयुक्त लाग्छ, त्योसँग मर्ज हुनसक्छ ।
के इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्ज हुन लागेका हुन् ? यस्तो छ रामकहानी
कुरा मिल्यो भने त २र३ महिनामै प्रक्रिया धेरै अघि बढ्छ । हाम्रो निष्कर्श के हो भने अब स/सानो संस्था लिएर हुँदैन, सकेसम्म वाणिज्य बैंकसँगै गर्ने भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि नै हामीले एभरेष्ट बैंकसँग मर्जरको कुराकानी गरेका थियौं, तर सफल भएन । अहिले हामी पनि बढी सिरियस छौं ।
अहिले पनि हाम्रो कोरा क्यापिटल २३/२४ अर्ब रुपैयाँ छ, अर्को वाणिज्य बैंक लिने हो भने कम्तिमा पनि ३४/३५ अर्ब कोर क्यापिटल हुन्छ, शाखा सञ्जाल पनि देशभर हुन्छ, तेस्पछि त ८/१० वर्ष हामीलाई अरुले भेट्दैनन् ।
तपाईको बैंकमा जसले निक्षेप राखेको थियो, उनीहरुलाई चाहीँ कोरोना भाइरसले कस्तो असर पर्यो ?
अहिले केही असर नहोला । ९.७५ प्रतिशत ब्याज आएको छ । अब त्यो मुद्दती निक्षेप अवधी सकिएपछि कम ब्याज आउने हो । अब उनीहरुले ८.७५ प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन् । त्यो पनि राम्रो रेट हो । हामीले कुनैबेला ४ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि मुद्दती निक्षेप लिएका थियौं । त्यो बेला पनि भाग्ने अवस्था थियो ।
ऋणीलाई भने अब आम्दानी गुमेको छ । त्यो अनुसारको असर भएको छ । तर, ब्याजदर भने बैंकले कम गरेका छन् । कतिपय ठूलो डिपमार्टमेन्ट स्टोरको व्यापार राम्र्रो भएको पनि देखिएको छ ।
तपाईंको बैंकका ऋणी ठूला व्यवसायी हुन् । उनीहरुको मनोवल कस्तो छ ?
त्यति खराब पाएको छैन । मेरो बैंकको ठूलो एक्सपोजर भनेको ट्रेडिङमा हो । अहिले असजिलो हुने भनेको गाडी हो । तर, अरु वस्तुको बिक्री कम भएपनि बिक्री त भएको छ । पछिल्लो समय कतिपय सामानको अभाव भएको छ । सामानहरु आउन अब एक दुई महिनामा आउन थाल्छ । अहिले पनि हरेक दिन एलसी खोल्ने छन् । उद्योगमा नै सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । स्टिलमा कम क्षमतामा चलेको छ । अब उनीहरुले पुल सेल गर्छ । अब पहिला ग्यारेन्टी लिएर सामान बिक्री गर्नुपर्ने थियो ।
कतिपयलाई मैले बेसरेटमा नै ऋण दिएको छु । त्यसमा दिँदा मलाई फाइदा हुने होइन । ब्याज घटाएर मात्र हुँदैन । हामीले ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ ।
सरकारले पनि प्याकेज घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि प्याकेज घोषणा गरेको छ । यी सबै प्याकेज बैंकबाट दिने छन् । बैंकलाई भने प्याकेज चाहिँदैन ?
हामीलाई दिने भनेको करमा सहुलियत हो । तर, सरकारले त्यो दिन सक्दैन । अर्थमन्त्रीलाई जसले जे भनेपनि कर उठाउनु नै पर्छ । जो अर्थमन्त्री भएपनि कर उठाउने नै हो । राजस्व बढाएर खर्च गर्नु नै पर्ने थियो । हामीले माग्ने आफ्नो ठाउँमा छ । हामीले देशको लागि पनि हेर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले दिने भनेको पुर्नकर्जाको एक खर्बको प्याकेज सानो रकम हो । ६ महिना प्याकेज दिने गरेको थियो । नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंकलाई नै दिन भनेको छ । त्यो अब आउला
सीसीडी रेसियोमा खुकुलो गरिदिनुपर्यो भन्ने माग पनि छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
अहिले ८४/८५ अर्ब रुपैयाँ तरलता थप बैंकमा छ । अहिले ७४ प्रतिशत सीसीडी बैंकको छ । विगतको जस्तो ७९ प्रतिशत भएमा बढाउन माग आउने थियो । यही वर्किङ क्यापिटल थप भएपछि सीसीडी टाइड हुन्छ । मैले ७/८ अर्ब दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नयाँ प्रोजेक्ट आउन सक्छ । तर, ठूलो आक्रामकरुपमा कर्जा प्रवाह भने हुँदैन । अहिले अवस्थामा तरलतामा सहज अवस्थामा छ । हामीले अब सहयोग गर्नुपर्ने हुँदा सीसीडी खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको छ, के ल्याइदिने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
सरकारको आफ्नो सिमितता छ । पुनर्कर्जामा कसलाई कति दिने भन्ने कुरा छ । १ अर्बको ऋण लिएको ग्राहकलाई १० करोडले कति राहत मिल्ला । तर, केही नहुँनुभन्दा राहत हुुनु राम्रो हो । सानोलाई सहज भएपनि ठूलोलाई सहज भने हुँदैन ।
कुनै ऋणीले तपाईको बाट घर वा गाडी किन्न ऋण लिएको थियो । कोरोनाका कारण उसको जागिर गयो वा आम्दानी घट्यो भने उसले कस्तो छुट पाउँछ ?
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ठूलो ऋण यो क्षेत्रमा छैन । अहिले प्रोटफोलियो बढाउने भनेर हामी लागेका थियौ । हामीले क्षेत्र हेरेर रिस्ट्रक्चर गरेर सहुलियत दिने छौं । हामीले गाडी किन्न दिएको ऋण दिएका थियौ । यही कोभिडको कारणबाट ऋण तिर्न सकेन भन्दैमा गाडी तानेर बैंकमा भने ल्याउने काम गर्दैनन् । रिपेमेन्ट सेड्युल बनाउनुपर्ने पर्छ ।
अहिलेलाई फकाएर ब्याज तिर्नुहोस् किस्ता ६ महिनापछि तिर्नुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रेडिङमा २० प्रतिशत क्यापिटल ऋणीले आफैंले हाल्नुपर्ने थिथो । त्यसलाई भने अहिलेको अवस्थामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । डेब्ट इक्युटीमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
लकडाउनका बेला विभिन्न बैंकहरुले करारका कर्मचारी हटाइरहेका छन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हटायो कि हटाएन ?
हामीले एक जना पनि करारका कामदार तथा कर्मचारी हटाएका छैनौं । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी हटाउने भन्ने कुरै हुँदैन । किनभने संकटका बेला आफ्ना कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्ने संस्थाप्रति जनविश्वास हुँदैन ।
‘फिनसेन फाइल्स’ खुलासा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी शंकास्पद कारोबार
राष्ट्र बैंकले नविल बैंक र युनाइटेड फाइनान्सलाई मर्ज गराउँदैछ ? यस्तो छ चौधरी परिवारको क्रस होल्डिङ